Resaky ny mpitsimpona akotry : mamofompofona ao amin’ny Face Book | NewsMada
Ampifamadihan’ny mpiangaly sy hafa mpifanerasera ao amin’ilay sehatra fifandraisana nateraky ny teknôlôjy atao hoe FB ilay fomba fitrenan’I Trimobe rehefa maheno fofona zaza maditra : ilay fanenony hoe “maimbo olombelona, maimbo olombelona” lasa “olombelona maimbo, olombelona maimbo”, dia velona an-tsoratra miparitaka manerana an’izao vodimototra rehetra izao ny fifanaboridanana an’izay olona tiana ampitanjahana ampahibemason’izay tia jerijery. Tafahoatra angamba ny fanalam-baraka na diso maloto ilay “tay nafenina” abaribarin’ny mpankahala, ka any amin’ny Fitasarana no miafara ny raharaha vokatry ny disadisa naterak’ilay fanahazana ny lamba maloton’ny sasany, ary nalefa any amponja ilay voatory ho mpanendrikendrika. Tsy isalovana amin’ny adidin’ny mpitsara, fa mba lasa eritreritra ihany momban’ity toe-draharaha ity. Fadiana mihitsy anefa amin’izany fivezivezin’ny saina izany ny fanononana ny anaran’ilay olona nitory, sao migadra eo koa ny tena. Sarotsarotiny hono io olona io momban’ny voninahitra maha vahiny azy, nefa angamba mitarika fotaka ihany ny faladian’ ilay kirarony mangiloilo tsara borosy, tsy voalohany izao no nifandonany tamin’ny mpaka kitay tao anatin’ity kirihatra atao hoe FB ity. Araky ny fitenenana moa dia “hitsikitsika tsy madihandiha foana fa ao raha”.
Misy fetra anefa ny sangisangy, aza taitra raha voarangotra raha volon-korona saka matory no sotontsotomina, maika izany moa ka tsy vitany ny hoe saka no kitikitihana fa sendran’ny kary manan-kery afaka mampiasa fahefana anjakazakana. Eny amin’ny fitsarana vao mifankahita.
Rehefa tonga amin’izay ambaratonga izay dia mifandona amin’ny fiarovana ny zo an’ny tsirairay anana ny tsiambaratelo ao anatin’ny fiainany manokana ny fahafahan’ny rehetra anambara ny zava-misy. Manahirana anefa ny fanavahana hatraiza ny fiainany manokana any amin’ny takona sy ny fisehony aty ivelany rehefa mikasika olona miaina ao amin’ ny sehatry ny fahalazana, toy ny mpanankato sy ny olomboafidy. Sandan’ny laza ny fitilin’ny olona ny tena izy mikasika ny olona malaza sy ny fiaimpiainany. Hoy ny torohevitra any amin’ny tany iray any ivelany, “raha tia hiaina ao anatin’ny fahasambaram-pilaminana dia ao anatin’ny fahanginana no iainana”. Fanampin’izany rehefa tia mideradera sy midedehaka an-kalamanjana tsara ny tsy fisarihana zava-mamofopofona ao aorianan’ny tena.